गुणस्तरीय नर्सिङ सेवाका आधार
२०७६ माघ १५ बुधबार १४:१३:४२ प्रकाशित
जनस्वास्थ्यको महत्वपूर्ण अंग हो नर्सिङ। पेसाको रुपमा विस्तार भएको सुरुको अवधिमा नर्सिङ जनशक्ति बिरामीको हेरविचार र सुसार गर्न मात्र चाहिन्छ भन्ने सोचाइ थियो। यसका साथै नर्सिङप्रतिको दायरा साँघुरो हुँदा दुःखी र गरिब मात्र यो पोसामा आकर्षित छन् भन्ने गरिन्थ्यो। तर आजकल यसको कार्य विभाजनमा आएका विविधता र उच्च शिक्षाको अवसरले त्यो सोचलाई परिवर्तन गरिदिएको छ।
शिक्षक, अन्वेषण, व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा नर्सिङको पहुँच बढिरहेको छ। धेरै समस्याका थाकलाई पन्छाउँदै अघि बढ्दै छ नेपाली नर्सिङ पेसा।
आज ५८औं राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस मनाइरहँदा हाम्रा सोच अनि संकल्पले पनि बामे सर्दैछन् भन्ने अनुभुति गराइरहेको छ। आजको नारा ‘गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा, जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा’ भन्ने रहेको छ। नर्सले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी ज्ञान, सिप र सकारात्मक सोच प्रयोग गरी बिरामीलाई विशेषगरी जेष्ठ नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ भन्ने नै हो।
मानिस जन्मेपछि मर्छ, यो स्वभाविक प्रक्रिया हो। वृद्धावस्था सुरु भएपछि विस्तारै शरीरका अंगहरु जीर्ण हुँदै जान्छन्। वृद्धावस्थामा मानसिक एवै शारीरिक समस्या आउनु स्वभाविक नै हो। वृद्धावस्थामा आउने यस्ता परिवर्तन तथा समस्यालाई स्वीकार गर्न सिकाएर जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने नर्सको उद्देश्य रहेको छ।
सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई निकै सुविधा दिने गरेको छ। गाडी भाडादेखि वृद्धभत्ता अनि कतिपय रोगका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। अझ कति अस्पतालले त जेष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटमा पनि सेवा प्रदान गरिरहेका हुन्छन्। नर्सले पनि उनीहरुलाई सहज रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु आवश्यक छ।
सर्वप्रथम गुणस्तरी नर्सिङ सेवा लागू गर्न जरुरी छ। गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षा, जसका लागि सम्पूर्ण आधारभूत सुविधा भएका नर्सिङ कलेज अनि दक्ष शिक्षक, शिक्षिका, बलियो सोच अनि सकारात्मक वातावरण हुनु जरुरी छ। गुणस्तरीय सेवाका लागि गुणस्तरीय नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुनु पहिलो जरुरी कुरा हो। यसलाई लागू गर्न नर्सिङका संघ संगठनहरु अझै जुझारु रुपमा लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ।
अर्को कुरा नर्सिङ पेसामा भएका विकृति एवं विसंगतिको अन्त्य गरी पेसालाई अझ सशक्त रुपमा अघि बढाउनुपर्ने अवश्यकता रहेको छ। च्याउसरी मौलाएका नर्सिङ कलेजको अनुगमन, नर्सिङ जनशक्तिको अनुशासन, कर्मप्रतिको लगनशीलता जरुरी छ। आफूभन्दा ठूलालाई आदर, सानालाई माया अनि सकारात्मक विचार राखेर पेसालाई मार्यादित बनाउनुपर्ने अवस्था छ।
नर्सले भोलिन्टियरको रुपमा काम गर्नेपर्ने अवस्थाको अत्य हुनु जरुरी छ। पेसागत हकहितका लागि नर्सिङ पेसामा आवद्ध सबै दिदीबहिनी अनि अग्रजहरुको हातेमालो भयो भने दक्ष नर्सिङ जनशक्ति उत्पादनका साथै गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षाको उपयोग गर्न सकिन्छ।
अन्त्यमा, नर्सिङको दायरालाई अझ विस्तार गर्दै पेसालाई चुस्त दुरुस्त बनाएर अघि बढ्नु जरुरी देखिन्छ । जेष्ठ नागरिक मात्र होइन, सम्पूर्ण नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा पुर्‍याउन सबै नर्स दक्ष हुनुपर्छ। पेसाको मान–मर्यादा राख्दै अग्रजलाई आदर गर्न र सानालाई माया गर्न जान्नु पर्छ। सम्पूर्ण नर्सिङ पेसासँग सम्बन्धित दिदीबहिनी अनि अग्रजलाई ५८औं नर्सिङ दिवसको शुभकामना।
(बगाले यति हेल्थ साइन्स एकेडेमीकी लेक्चरर हुन्)
१. अनसनरत डा गोविन्द केसीलाई जबर्जस्ती ट्रमा सेन्टर लगियो [भिडियो]
२. मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणः ५.२ प्रतिशत किशोर–किशोरीमा मानसिक समस्या
३. म भित्रको डाक्टर
४. डा केसीको अनसनमा जिल्ला अस्पताल ओखलढुंगाका स्वास्थ्यकर्मीको ऐक्यवद्धता
५. कोरोनाको खर्च विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चको परमादेश
६. कान्ति बाल अस्पतालले विपन्न र बेवारिसे बालबालिकालाई आकस्मिक उपचार सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने
७. विजय लामाको कोरोना अनुभव : कोरोनालाई ख्यालठट्टाको रुपमा नलिनुहोला [भिडियो]
९. काभ्रेमा थप एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु
१०. कोरोना भाइरस संक्रमितमा देखिन सक्ने ११ लक्षण, कस्तो लक्षण देखिए के खाने, के नखाने?